Ndị na - ahụ maka Intanet - Olee otu mmadụ si aghọ onye ụka nke Kraịst?
Na nzoputa nke mkpuru obi mmadu, e nwere 2 ihe di nkpa: ngalaba nke Chineke na nke mmadu. Akuku nke Chineke bu ihe buru ibu, "n'ihi na amara ka eji zoputa unu site n'okwukwe, nke ahu abugh kwa n'onwe unu, obu onyinye oburu na Chineke, obughi nke olu, ka madu ghara itu otuto" (Efesọs 2: 8-9). Ịhụnanya nke Chineke nwere maka mmadu duuru ya ka o zite Kraist n'ime uwa iji gbaputa mmadu. Ndụ na nkuzi nke Jisos, àjà n'elu obe, na ikwusa ozioma nye ụmụ nwoke bụ akụkụ nke Chineke na nzọpụta.
Ọ bụ ezie na òkè Chineke bụ akụkụ buru ibu, akụkụ mmadụ dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na mmadụ ga-eru n'eluigwe. Mmad aghaghŽ irube isi n '] chŽchŽ nke mgbaghara nke Onyenwe anyŽ kwup tara. Akụkụ nke mmadụ nwere ike ịpụta n'ụzọ doro anya na usoro ndị a:
Nụrụ Oziọma. "Gini ka ha gesi kpokuo onye ha onwe ha ekwegh na? Ma olee otua ka ha gaesi kwere n'onye ha nuru? Ma olee kwa ka ha gege ma obugh onye nkwusa? (Ndị Rom 10: 14).
Kwere. "Ma asi na okwukwe adigh, obu ihe puru ime ya uto: n'ihi na onye nabiakute Chineke aghagh ikwere na odi ya, na obu onye nkwughachi nke ndi choro ya" (Hibru 11: 6).
Chegharịa banyere mmehie ndị gara aga. "Chineke elegharawo oge nke ihe omuma anya, ma ugbua o nyere ndi mmadu iwu ka ha nile chegharia ebe nile" (Olu 17: 30).
Kwupụta Jizọs dịka Onyenwe anyị. "Lee, mmiri a bụ: gịnị ga - eme ka m ghara ịbụ onye e mere baptizim?" Filip wee sị, "Ọ bụrụ na i ji obi gị dum kwere, o wee zaa sị," Ekwere m na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke "(Ọrụ 8: 36 -37).
Na-eme baptizim maka mgbaghara mmehie. "Pita we si ha, Chegharianu, ka e meekwa unu nile baptism n'aha Jisos Kraist rue ngbaghara nke nmehie nile unu, unu gewe kwa onyinye nke Mo Nso" (Olu 2: 38).
Bie ndụ Onye Kraịst. "Unu onwe unu bu ndi a hoputara, ndi nchu aja ndi eze, mba di nso, ndi mmadu ka ha buru ihe onwunwe nke Chineke, ka unu we gosiputa ihe oma nke onye kporo unu si na ochichiri bia n'ebube ya di ebube" (1 Peter 2: 9).